यसरी गरिदैछ सुधार बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल ! | suryakhabar.com
Home स्वास्थ्य यसरी गरिदैछ सुधार बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल !
यसरी गरिदैछ सुधार बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल !
कार्यकारी निर्देशक डा विजयचन्द्र आचार्य
भरतपुर । चितवनस्थित बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल सुधारोन्मुख अवस्थामा रहेको छ । तीन वर्षअघि अस्तव्यस्त बनेपछि स्थानीय प्रशासनले हस्तक्षेप गर्न बाध्य भएको सो अस्पताल अहिले सुधारोन्मुख अवस्थामा रहेको हो ।
अस्पतालका उपकरण बिग्रिएका, आवश्यक सामग्रीको अभाव, चिकित्सक कर्मचारीले काम नगरी निजीमा केन्द्रित भएपछि अस्पताल अस्तव्यस्त भएको थियो । चौतर्फी दबाबपछि स्थानीय प्रशासनले अस्पतालमा हस्तक्षेप गरी सुधारका लागि दबाब दिएको थियो । सो पश्चात् अस्पताल क्रमशः सुधारको बाटोमा अघि बढेको स्थानीयवासी बताउँछन् ।
अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा विजयचन्द्र आचार्यले आफू प्रवेश गर्दा सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा रहेको अस्पतालमा निकै काम गर्न सकेको बताए । १९४ श्ययाको सो अस्पताललाई गत वर्षवाट ४४३ श्यया बनाइएको छ । सेवाको अभावमा बिरामी कम हुँदा तीन वर्षअघि सम्म दैनिक रु तीन लाखको हाराहारीमा राजश्व सङ्कलन हुँदै आएकामा अहिले बढेर रु २२ लाख पुगेको आचार्यको भनाइ छ । क्यान्सर बिरामीका लागि अत्यावश्यक मानिने रेडियोथेरापी मेशिनको अभावमा दैनिक ६० जना हाराहारीले मात्र अस्पतालमा सेवा पाउने गरेका थिए । बिग्रिएका उपकरण बनाउने र नयाँ थपिने क्रमसँगै अहिले दैनिक १६० जनाले यो सेवा पाउने गरेको अस्पतालले जनाएको छ ।
रेडियोथेरापी विभागमा आइजिआरटीसहितको रेडियोथेरापी क्लिन्याक नाइन मेशिनबाट पहिलोपटक सेवा प्रारम्भ गरिएको छ । नेपालमा नै पहिलोपटक जडान भएको सी।टी सिमुलेटर मेशिन र शरीरको भित्री भागमा रेडियोथेरापी गर्ने ब्राकी थेरापी मेशिनबाट प्रदान गर्ने सेवा सञ्चालनमा आएको कार्यकारी निर्देशक आचार्यले जानकारी दिए ।
कार्यकारी निर्देशक आचार्यका अनुसार प्याथोेलोजी विभागमा रहेका सम्पूर्ण उपकरणहरु सञ्चालनमा ल्याई पहिलोपटक लिक्युड वेस्ड साइटोलोजी सेवा शुरुआत गरिएको छ । यसले मुख्यतः बायोप्सीका लागि तीन महीनासम्म कुर्नुपर्र्ने बाध्यता हटेर तीन हप्तासम्ममा नतिजा आउने गरेको छ । पुरानो प्रविधिबाट हुने गरेको क्यान्सर स्क्रिनिङ सेवाको सट्टामा एलविसी नामक नयाँ उपकरणसहितको सेवा शुरु गरिएको आचार्यले बताए ।
यस्तै अत्याधुनिक ल्योप्रोस्कोपी मेशिनबाट दिइने सर्जरी सेवा सञ्चालन गरिएको उपनिर्देशक डा निर्मल लामिछानेले बताए । रेडियोडायग्नोसिस विभागमा भिडियो एक्स–रे, म्यामोग्राफी, एमआरआई सेवा अवरुद्ध भएकामा मर्मतसम्भार र नयाँ खरीद गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । सिटी स्क्यान, एमआरआई तथा म्यामोग्राफी सेवा लिन पालो लिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको लामिछानेको भनाइ छ । सर्जरी विभागको गाइने, युरो, जिआई, स्तन, न्यूरो, अर्थोपेडिक शाखावाट दिइँदै आएको सेवाको अतिरिक्त शल्यक्रियाको दिनमा समेत बहिरङ्ग सेवा दिन शुरु गरिएको छ ।
समयमा बोलपत्र आह्वान नहुँदा हुने गरेको समस्याको अन्त्य गर्दै अस्पतालले वार्षिक बोलपत्र आह्वानको प्रक्रिया समयमा नै सम्पन्न गरी खुद्रा खरीद प्रणालीको अन्त्य गरेको जनाएको छ । आचार्यले १२ वर्षदेखि रोकिएको कर्मचारीको वृत्तिविकास एवं पदपूर्तिको काम लोकसेवामार्फत अघि बढाएको, पोखरा विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरेर क्यान्सर विषयमा नर्सिङ स्नातकको पढाइ शुरु गरिएको, बहिरङ्ग सेवामा टोकन प्रणाली लागू गरिएको र अस्पताल परिसरमा सिसी क्यामेरा जडान गरेर सेवालाई अझ बढी प्रभावकारी बनाइएको जानकारी दिए ।
अस्पतालले दुई स्थानमा फार्मेसी स्थापना गरी सस्तो मूल्यमा औषधि बिक्री शुरु गरेको छ । अस्पतालको सुधारसँगै उपचारका लागि बाहिर धाउनुपर्ने बाध्यताबाट केही कमी आएको क्यान्सर सेवा समाजका निवर्तमान अध्यक्ष श्यामप्रसाद लामिछानेले जानकारी दिए । अस्पतालमा गएको असोज ३ गतेबाट अध्यक्ष पद रिक्त छ । नयाँ अध्यक्षको नियुक्त गरी पु¥याउन नसकेका सेवाहरु पु¥याउन सकेमा देशको मात्र होइन एशियाको केन्द्रका रुपमा यसलाई विकास गर्न सकिने लामिछानेले बताए ।
अस्पतालका सेवा पहिलेको भन्दा सुधार भए पनि अरू बढी सुधार गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको उनले बताए ।
आँखा उपचारमा नेपालीको पहुँच बढ्दैछः डा टण्डन